'हरे शिव यो के भइरहेछ ?'- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
नियम कानुन पन्छाएर आफ्ना मान्छेको स्वार्थमा जे पनि गर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ ? प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा एकातिर छ, काम अर्कोतिर ।
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति एवं चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन टोलीका विज्ञ केदारभक्त माथेमाले प्रधानमन्त्रीको सोझो निर्देशनमा सारा प्रक्रिया लत्याएर बीएन्डसी कलेजलाई सम्बन्धन दिने कदमको नकारात्मक असर दीर्घकालसम्म हुने बताएका छन् ।
त्रिभुवन विश्विद्यालयका पूर्वउपकुलपति एवं चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन टोलीका विज्ञ केदारभक्त माथेमासँग जनकराज सापकोटाले गरेको कुराकानी :
कोरोना संक्रमणका कारण समाज अस्तव्यस्त भइरहेको मौका छोपेझैं गरेर सरकारले बीएन्डसी कलेजलाई सम्बन्ध दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएछ नि ?
त्यही त अचम्मको कुरा छ । यतिबेला त सरकारको प्राथमिकता आउँदै गरेको कोरोनाको तेस्रो लहर रोक्न तयारीमा व्यस्त हुनुपर्ने हो । पहिलो डोज भ्याक्सिन लगाएका नागरिकलाई दोस्रो डोज भ्याक्सिन दिन जुट्नुपर्ने हो । सबै नागरिकलाई भ्याक्सिनको प्रबन्ध गर्न कूटनीतिक रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने हो तर सरकार नियम प्रक्रिया सबै मिचेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागेको छ । यो सब देख्दा त के गरूँ के गरूँ हुँदोरहेछ । छटपटी हुने रहेछ । हे राम भनेजस्तो हुँदोरहेछ ।
सरकारका निम्ति मेडिकल कलेज सम्बन्धको विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय किन भयो ?
त्यही त अचम्म छ । प्रधानमन्त्रीको सोझो निर्देशनमा सारा प्रक्रिया लत्याएर सम्बन्धन दिने कुराको लामो असर छ । यसको मूल्य भोलि सिंगो समाजले चुकाउनुपर्छ । प्रजातन्त्रमा पनि यस्तो मनपरी हुन्छ ? कोरोनाको आवरणमा मनपरी शासन चलाउन पाइन्छ ? यस्तो कामलाई त इतिहासले कहिल्यै माफी गर्दैन ।
यति हुँदा सरकारको कदमविरुद्ध बोल्ने आवाज सुनिँदैन त ?
यतिबेला त चिकित्सा शिक्षामा लागेका मान्छेहरू, चिकित्सक संघका मानिसहरूले बोल्नुपर्ने हो । संवैधानिक निकायहरू, काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट, प्राध्यापक संघ कराउनु पर्दैन ? मसानघाटजस्तो समय भएको छ । धन्न नागरिक आन्दोलनमा लाग्ने केही साथीहरू बोल्नुभएको छ ।
समाज अस्तव्यस्त भइरहेका बेला जसरी प्रक्रिया मिचेर मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागिएको छ । यसको असर के हुन्छ ?
एउटा रेस्टुराँमा ५० जनालाई खुवाउने क्षमता छ तर त्यसले १०० जनालाई खाना खुवाउन थाल्यो भने के हुन्छ ? काठमाडौं विश्वविद्यालयले अहिले नै सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजलाई अनुगमन गर्न र सहयोग पुर्‍याउन सकिरहेको छैन । यस्तो बेला सम्बन्धन थप्दै गएपछि के हुन्छ ? सम्बन्धनको विषय चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिन्छ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर खस्कियो भने त्यसको सोझो असर जनतामा पर्छ । हामीले यस्तो नहोस् भनेर महिनौं लगाएर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार प्रतिवेदन बनायांैं । त्यतिका धेरै विज्ञले लामो समय खर्चेर बनाएको प्रतिवेदन निश्चित स्वार्थका निम्ति लत्याउने काम भयो । भकाभक मेडिकल कलेज थप्दै जाने अनि गुणस्तर भन्ने कुरा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम हुने भयो ।
यो कदमलाई कसरी लिनुभएको छ ?
कुनै घाउ देखिन्छ । कुनै घाउ देखिँदैन । यो नदेखिने घाउ हो । यसले विकृतितिर लैजान्छ । नियम कानुन पन्छाएर आफ्ना मान्छेको स्वार्थमा जे पनि गर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ ? प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा एकातिर छ, काम अर्कोतिर ।
सरकारका निम्ति मेडिकल कलेज प्राथमिकतामा पर्‍यो होला नि त ?
त्यो नितान्त स्वार्थको कुरा मात्रै हो । खासमा देशको अहिलेको प्राथमिकता के हो भन्ने नै छैन । जापानले केही दिनअघि कम्बोडिया र भियतनामलाई भ्याक्सिन दियो । हामीले त्यहाँबाट पनि भ्याक्सिन पाउन सक्थ्यौं तर पाएनौं । हामीले कहिले दोस्रो डोज पाउँछौं भनेर पाका उमेरका साथीहरू सोध्नुहुन्छ । त्यसको कुनै जवाफ सरकारसँग छैन । आजै मात्र मैले दुई जना अग्रजको मृत्युको खबर सुनें । हरेक दिन मृत्युको खबर सुनिरहेको छु तर सरकारलाई भने सत्ताबाहेक अरू केही छैन भनेजस्तो छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७८ ११:४४
पूर्वतयारी नगरिँदा मृत्युदर बढी
ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामी धेरै भए पनि उपचारमा ध्यान दिइएन
जेष्ठ २९, २०७८ ओमप्रकाश ठाकुर
सर्लाही — कोभिड–१९ को दोस्रो लहरमा पूर्वतयारी नगरेका सर्लाहीका पालिकाहरूमा मृत्युदर बढी देखिएको छ । स्वाब संकलन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तथा आइसोलेसन निर्माणमा तदारुकता नदेखाएका पालिकामा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढी देखिएको हो । तर पूर्वतयारीमा जुटेका पालिकामा भने संक्रमितको संख्या धेरै देखिए पनि मृत्यु दर निकै कम छ ।
आइसोलेसन बनाइएको सर्लाहीको मलंगवास्थित सन्त अल्पमाई रामनारायण नर्सिङ कलेज । तस्बिर : ओमप्रकाश/कान्तिपुर
सर्लाहीमा कोरोना माहामारीको दोस्रो लहरलाई ब्रेक गर्न कुनै तयारी नगर्ने पालिकाको संख्या धेरै छ । त्यहाँ जाँच र उपचार नभएकै कारण मृत्युको संख्या बढी छ । स्वाब संकलन नै नगरेका पालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामीको मृत्युको संख्या पनि उत्तिकै छ । तर त्यसको कहीं कतै तथ्यांक संकलनसमेत भएको छैन । यसमा पालिकाले पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
कोरोनाको दोस्रो लहरमा कविलासी नगरपालिका–७ को एउटै बस्तीमा मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका ५ जनाले ज्यान गुमाए । लक्षण पूरै देखिएर मृत्यु भए पनि पालिकाले न परिवारका सदस्य तथा कन्ट्याक्टका आधारमा स्वाब संकलन गर्‍यो, न त मृतकको तथ्यांक नै संकलन गरेको छ । पालिकाले यसपटक कोरोनासँग जुध्न कुनै योजनै बनाउन नसकेको नागरिकको भनाइ छ । यहाँ निषेधाज्ञा पालनामा पनि पालिका उदासीन देखिएको स्थानीय मनोजकुमार ठाकुरले बताए । ‘गाउँमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका ५ जना बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाए, तिनीहरूका परिवार अथवा नजिक बसेको मानिसको स्वाब संकलनसमेत हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यसपटक स्थानीय सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुन सकेन, न त निषेधाज्ञा पालना गराउन कुनै पहल नै गर्‍यो ।’
बलरा नगरपालिका–६ मिर्जापुरमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका चार जनाले ज्यान गुमाए । उनीहरूमध्ये एक जनाको उपचारका क्रममा अस्पतालमा तथा तीन जनाको गाउँमै मृत्यु भएको थियो । उनीहरू उच्च ज्वरो आएर घरमै थलिएका थिए । एक जनालाई भने अन्तिम समयमा अस्पताल लगिएको थियो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको टोलीले मृतकको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको जाँच गर्दा २१ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो । त्यतिमात्र हैन भारतीय सीमामा रहेको यो गाउँमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका अन्य ७ जनाको मृत्यु भएको स्थानीयले जनाएका छन् ।
जिल्ला प्रशासनको तथ्यांकमा कोरोनाको कारण मृत्यु भएको संख्या २ देखिए पनि यो संख्या दर्जनभन्दा बढी भएको स्थानीय शिवेन्द्र मिश्रले बताए । मिश्रका अनुसार कोरोनाको दोस्रो लहरमा पालिकाको भूमिका शून्य देखिएको छ । ‘कोरोनाको संक्रमण रोक्न पालिकाको कुनै भुमिका नै देखिएको छैन, आइसोलेसन त परको कुरा स्वाब संकलनमा पनि चासो देखाएको छैन,’ उनले भने ।
यद्यपि मेयर अभयकुमार सिंहले पालिकाभित्रको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मास्क र सेनिटाइजर उपलब्ध गराएको बताउँछन् । उनले स्वाब संकलनमा नागरिकले नै चासो नराखेको बताए ।
सदरमुकाम मलंगवामा जिल्लाका अन्य पालिकाभन्दा बढी संक्रमितको मृत्यु भएको छ । प्रशासनको रेकर्डअनुसार यहाँ ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । कोरोना ब्रेकका लागि मलंगवा जिल्ला अस्पतालको भर परेको थियो । मृत्युको संख्या बढेपछि बल्ल एक साताअघि पालिकाले आइसोलेसन निर्माण गरेको छ । बेलैमा कोरोना ब्रेकका लागि रणनीति नअपनाउँदा मृत्युको संख्या बढी देखिएको नागरिकको गुनासो छ ।
नागरिक समाजका महासचिव शिवचन्द्र चौधरीले सदरमुकाम मलंगवासहित पूर्वतयारीमा नजुटेका पालिकामा कोरोनाका कारण मृत्युको संख्या बढी देखिएको बताए । उनले हरिवन र गोडैता नगरपालिकामा मृत्यु दर कम हुनुका कारण पालिकाले पूर्वतयारी गरेर सावधानी अपनाउनु नै रहेको जानकारी दिए । ‘जुन पालिकाले संक्रमण रोक्न पूर्वतयारी गरे त्यस पालिकामा मृत्यु दर कम रहेको हामीले पाएका छौं, त्यहाँ लक्षण देखिएका मृतकको पनि स्वाब संकलन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले कोरोनाको दोस्रो लहरमा नागरिकको स्वास्थ्यप्रति चासो नै दिएको पाइँदैन ।’
मलंगवा नगरपालिकाका मेयर निर्षल साहले यस वर्ष जिल्ला अस्पतालले कोभिड वार्ड सञ्चालनमा ल्याएपछि पालिकाले पहल नगरेको बताए । उनले मृत्युको संख्या बढ्न थालेपछि आइसोलेसन बनाएको तर त्यहाँ कोही पनि बस्न नमानेका जानकारी दिए । जिल्लामा हालसम्म ७३ जना संक्रमितको ज्यान गएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७८ ११:४१
जित्न र जिताउन क्रियाशील सदस्यता दिने गरिन्छ : प्रदीप पौडेल
तत्काल ठाकुरजीहरूसँगै बस्ने सम्भावना छैन : रामसहायप्रसाद यादव
सँगै बस्ने कुरा दुई पक्षको व्यवहारमा निर्भर हुन्छ : लक्ष्मणलाल कर्ण
‘केवल नेतृत्वको हानाथापले महाधिवेशनको महत्व घटायो’